के दियाबल साँच्चै छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उरुन्ड् उर्दू एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक काबुभरदियानु काम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा खाकस ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टालियन टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नेपाली पंगासिनन् पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोमेरानियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली फ्राफ्रा बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्गोलियन मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज मिङ्रेलियन मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लारी लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) वेल्श शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिडामा सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
हो, दियाबल साँच्चै छ। दियाबल नै त्यो स्वर्गदूत थियो, जो पछि दुष्ट भयो र परमेश्‍वरको विद्रोह गऱ्‍यो। त्यो नै “यस संसारको शासक” हो। (युहन्‍ना १४:३०; एफिसी ६:११, १२) बाइबलमा उल्लिखित निम्न नामहरू र जानकारीबाट दियाबल कस्तो किसिमको व्यक्‍ति हो भन्‍ने कुरा हामी थाह पाउन सक्छौँ:
सैतान जसको अर्थ “विरोधी” हो।—अय्युब १:६.
दियाबल जसको अर्थ “निन्दक” हो।—प्रकाश १२:९.
सर्प, बाइबलमा चलाइएको यो शब्दको अर्थ “छली” हो।—२ कोरिन्थी ११:३.
कुनै खराब भावना मात्र होइन
कोही-कोही सैतान अर्थात्‌ दियाबल हामीभित्र हुने कुनै खराब भावना हो भनेर सोच्ने गर्छन्‌। तर बाइबलमा परमेश्‍वर र सैतानबीच कुराकानी भएको विवरण पाइन्छ। परमेश्‍वर त्रुटिरहित हुनुहुन्छ। त्यसैले उक्‍त विवरणमा उहाँ आफैले आफूभित्रको कुनै खराब भावनासित कुराकानी गरिरहनुभएको हुनै सक्दैन। (व्यवस्था ३२:४; अय्युब २:१-६) त्यसैगरि सैतानले पापरहित येसुलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्यो। (मत्ति ४:८-१०; १ युहन्‍ना ३:५) तसर्थ, दियाबल साँच्चै छ र यो कुनै काल्पनिक व्यक्‍ति होइन भन्‍ने कुरा बाइबलबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
धेरै मानिसले दियाबल साँच्चै छ भन्‍ने कुरामा विश्‍वास नगरेको देख्दा के हामीले अचम्म मान्‍नुपर्छ? पर्दैन। किनभने सैतानले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न छली कामहरू गर्छ भन्‍ने कुरा बाइबलले बताएको छ। (२ थिस्सलोनिकी २:९, १०) आफ्नो अस्तित्व छ भन्‍ने कुरा मानिसहरूले थाह पाउन नसकून्‌ भनेर तिनीहरूको समझशक्‍तिलाई अन्धो तुल्याउन त्यो सफल भएको छ।—२ कोरिन्थी ४:४.
दियाबलबारे अन्य गलत धारणाहरू
मिथ्या: दियाबलको अर्को नाम लुसिफर हो।
तथ्य: केही बाइबलमा “लुसिफर” भनेर अनुवाद गरिएको हिब्रू शब्दको अर्थ “चम्किलो तारा” हो। (यसैया १४:१२) यसैयाको विवरणलाई ध्यान दिने हो भने उक्‍त शब्दले बेबिलोनको राजकुल वा वंशलाई सङ्‌केत गर्छ, जुन वंशलाई परमेश्‍वरले अहङ्‌कारी भएको कारण पतन गराउनुभएको थियो। (यसैया १४:४, १३-२०) बेबिलोनी राजाको पतनपछि तिनको लागि व्यङ्‌ग्यात्मक ढङ्‌गमा “चम्किलो तारा” भन्‍ने अभिव्यक्‍ति प्रयोग गरिएको थियो।
मिथ्या: सैतानले परमेश्‍वरको तर्फबाट “अभियोजक”-को रूपमा काम गर्दै छ।
तथ्य: दियाबल परमेश्‍वरको शत्रु हो, सेवक होइन। सैतान अर्थात्‌ दियाबलले परमेश्‍वरको सेवा गर्ने व्यक्‍तिहरूको विरोध गर्छ र तिनीहरूमाथि झूटो आरोप लगाउँछ।—१ पत्रुस ५:८; प्रकाश १२:१०.
स्वर्ग बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
हामीलाई सैतानको आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न परमेश्वरले चारवटा प्रबन्ध गर्नुभएको छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के दियाबल साँच्चै छ?
ijwbq लेख ४६